Golaha Baarlamaanka waxaa doorasho ku hela xubinnimadiisa cidii hesha codka dadweynaha. Mudaneyaasha Igad ay u soo doortay iney wakiil u noqdaan dadka Soomaaliyeed maxey noqon kartaa awooda ay dalkooda xeer ugu dejin karaan. Kalsoonida shacabka kuma timaado ku dhaqanka dowlad qabiil, dejinta dastuur qalaad iyo u adeegida dano shisheeye. Igad waxey dejisey dastuurkii iyo xeerkii lagu soo xuli lahaa mudanayaasha baarlamaanka, waxeyna danta Igad ka badan weysey iney aqoonsadaan odeyaasha qabiilka, hogaamiyeyaasha dagaalka, iyo ururada rayidka ka soo jeeda danaha shisheeye. Masuuliyada Soomaalinimo ahaan ku jirta mudanayaasha Igad, waxaa wax badan ka tayo roon, waxtarka aadaminimada ku jirta gumeysi toosa ee wadan xoog weyn uu maanta dalka ku qabsado. Waxey u muuqataa in dowladnimo Soomaaliyeed ay gashay god, dadkeeduna uu ka baxay garabkeeda.
Nidaam dowladnimo dalka Soomaalida marna loogama dhaqmin. Inta ay noo jirto iyo meesha ay naga xigto midna lama doonin helideeda. Dalka waxaa soo maray xukun beleed ku dhisnaa boqortooyo; xukun ku saleysan iska caabinta cadowga deriska iyo kii Yurub; xukun diin; mid qabiil; mid ciidan iyo mid jabhadnimo. Intaas midba midka ka dambeeya wuxuu ku tilmaamayey inuusan lahayn dhaqan dowladnimo. Hogaamiyeyaasha xukuumadahaas midba dowladnimada meel ayuu ka doonay: mid wuxuu ka doonay qabiil; midna diin; midna Carab; midna galbeed; midna bari.
Dowladnimadu waa nabadgelyo iyo cadaalad inaad ummadda ku dhaqdid. Dhowrista xeerka degsan iyo amaangelinta hantida gaar, guud ama shisheeye. Socodsiinta xeerka iyo qawaaniinta dhowra kaladambeynta. Dhaqaale siinta hooyooyinka nolosha caruurta la halgamaya, cuuryaanka, waayeelka iyo dadka maskaxda iyo jirka ka jiran. Ixtiraamka xoriyada iyo ilaalinta xaquuqda dadka. Dadka dalka u dhashay oo la dhageysto rabitaankooda iyo xeerdejinta oo lagu saleeyo danahooda guud. Dadka tirade yar oo aadaminimadooda la garwaaqsado iyo madaxbanaanida dalka oo laga difaaco shisheeyaha.
Dowladnimadu ma jirto dhinaca qabiilka, diinta ama danaha shisheeyaha. Dowladnimada intii bari iyo galbeed laga dooni lahaa waxaa wanaagsan oo haboon in si dhow looga raadiyo aqalka Soomaalida. Dowladnimada dadka waxaa saldhig u ah siyaasada guriga, waana nidaam u daneynaya aragtida guud ee dadka ay isla gartaan.
Maantana waxaa loo kacay Afrika oo mudanayaal ay soo xushay golaha baarlamaanka noo soo gelisey. Weli waxaan ku soconaa wadadii qaloocneyd oo waxaan tilaabada u qaadnay dhinaca aysan dowladnimadu naga xigin. Mudanayaasha Igad waa lugooyo cusub, waana mariinhabow ku dhacday dowladnimadii dadka Soomaaliyeed. Waxey soo kordhin dastuur qalaad oo ay duuduub dalka ku soo geliyaan iyadoon afti loo qaadin, waxey u ololeyn dejinta xeerarka quseeya danaha shisheeye oo ay wakiilka ka yihiin iyo dowlad qabiil. Dowladnimadu waa naga dheer tahay inta lagu saleynayo qabiil, diin iyo dano shisheeye, iyo inta hogaamiye aan aqoon cilmiyeed lahyn si sahlan loogu dooranayo qiiro ku dhisan laab-la-kac aan lahyn miisaamida kartidiisa, biseylkiisa, iyo masuuliyadnimda hogaamintiisa guud.
Haddii ay isqabsadaan mudanayaasha Igad iyo madaxda ka soo dhexbaxda sow ma aha in loo noqonayo dib u heshiisiin shisheeye ama in halis loo galo in dalku degaano kala madaxbanaan u kala jajabo. Dal yar oo saboola oo nidaam federaala loo dejiyey waa wax loogu talo galay inuu yimaado isqabqabsi badan, dagaal degaan, iyo lagama maarnimada dhexdhexaadin shisheeye oo joogtaa.
Ujeedada dalal ka mida Igad waa iney dalka soo geliso ciidamo shisheeye, si taas ay ugu meelmartana waxey soo dhiseen mudanayaasha baarlamaanka iyo nidaamka federaalka. Mar haddii aan la hureyn dhexdhexaadinimo joogtaa waa in danaha deriska iyo kuwa ka shisheeya oo ay Igad qorshaheeda u xilsaaran tahay ay uga faa`ideysato meelmarinta keenista cudud shisheeye oo awood ciidan wax ku maquunin karta dalka gudahiisa. Waxaan shaki lahayn in xoolo badan oo magaca Soomaalida lagu keeno si dadban loogu maamulanayo qarashka ku baxaya joogista ciidamada shisheeye intii la gelin lahaa mashruucyo u daneynaya dadka ama dalka. Waa waxaan dhaceyn marna in mudaneyaasha Igad ay ka horyimadaan danaha iyo awaamirta dowladaha Igad iyo kuwa dabayaala. Waxaa laga yaabaa in mudanayaasha Igad ay sahalsadaan u rukuucida rabitaanka Igad ay ku dooneyso keenista ciidamo shisheeye. Ogolaanshaha keenista ciidan shisheeye ma aha wax la fududeysto, maxaa yeelay howlgalada ay fulinayaan iyo qaadistooduba midna dhab ahaantii uguma xirna raali ka noqoshada ama rabitaanka dadka dalka iyo madaxdooda. Ujeedadu waa sida seef leh laba weji oo soofeysan, kan lagu tusayo waa kan laguu sheegay ujeedada uu qabanayo, kan lagaa qariyeyna waa mid loogu talagalay in la mariyo cida lagu adeeganayo markii ay gadaal wax ka garato. Axmad Gurey si uu uga guul helo dagaalka uu kula jirey cadawga deriska wuxuu dan biday inuu ciidan warsado Pershia(Iran), Masar iyo wadama Carbeed, si islaanimana dalkiisa loogu hiiliyo, nasiibdarro Axmed dabadiis iyagaa dalkii qabsaday oo gumeystey. Cali Yusuf isaga ayaa u saxiixay soo gelidii gumeysiga talyaaniga isaga oo aaminsanaa in qabiilkiisu dalka xukumayo ama qabsanayo ama ku xumeynayey halgankii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan, laakiin isagaa ku baxay. Janaraal Caydiid isagaa u sabab ahaa keenista ciidamada shisheeye oo uu hogaaminayey Mareykanku isaga ayaana ku baxay. Haddii meesha ciidan shisheeye yimaado way dhamaaneysaa kalsoonida aad ku qabtid awooda dastuurkaaga, waxaa si toosa cagta loo marinayaa hogaamiyeyaasha dhaqanka, diinta iyo siyaasada iyadoon waxba loo adeegsan in lagu kiciyo kooxdiisa, qabiilkiisa, xisbigiisa, kuxigeenadiisa ama kusimayaashiisa. Wadanka cadawgiisa deriskaa iyo kan ka shisheeya oo ku heshiisa si aqoon sare leh in dalka lagu daldasho ayaa ciidanka xoogiisa iyo maalgelintiisuba ay ka imaaneysaa. Ciddii kaa aqoon badan ama kaa farsamo badan si aadan dareemi karin ayey dhaxalkaaga ula wareegin ama si kuugu qaadata waqti dheer inaad ku garatid ayeey qorshaheeda kugu qancin. Waxaa aad u badan xadgudubyada lagula kacayo dadka dalka u dhashay oo aysan jirin awood wax ka qaban karta tacadiga ciidamada shisheeye, raaligelin laguu soo jeediyo mooyaane. Dalku wuxuu dhowrsan yahay inta aysan imaan ciidamo shisheeye oo dalal kale talada iyo amarka ka qaadanaya. Mudanayaasha Igad waxaa la tusay in qabiil wax lagu qeybsaday, in rabitaanka iyo awooda shisheeye mudane looga dhigay, in loo keenayo cudud ciidan oo difaacda dowladooda isagana uu ogolaado.
Qabiilku ma leh cadaalad oo beelna ma jecla in qanuun wax lagu wadaago, waxaana xaqa ka horeeya tolweyni iyo xeer jajab. Diinta qasadkeedu waa Alle ka cabsi, dadkuna ma xukumi karo waxa qofka qalbigiisu uu aaminsan yahay. Wadaadadu ma awoodaan iney aduunka qofna marsiiyaan mudnaanta uu u leeyahay janada ama naarta midood oo waa xukun u dhaxeeya qofka iyo Ilaahiis. Waxaa lama huraan noqotay in dadku sameysto aragtiyo guud oo ay ku mideysan yihiin. Intii ay isku dhowdahay fikradooda siyaasadeed waxey awoodooda ku kulan siiyeen Xisbi siyaasadeed. Dalka waxaa lagu xukumaa qorshe ay dadka intiisa badan isku afgartaan oo uu hogaamiyo siyaasi loo doortay xilkaas. Xisbiyo kooban oo la abuuro waxey dadka ku soo aruurinayaan afkaar mideysan oo doorasho lagu kala adkaan karo. Saddex xisbi oo waa weyn oo dalka loo abuuro ayaa dadka u kala jeedin karta saldhiga siyaasadeed ee awooda dalka lagu hogaaminayo. Cidii rabta doorasho xalaala oo dadkaas si siman wax ugu qabaneysa waxey loolan la isku reebayo u geleysaa gudaha xisbigeeda, lana geleysa musharaxiinta xisbiyada kale si ay kalsoonida dadka ugu buuxiso jagada siyaasadeed oo ay u tartameyso. Haddii qabiil wax lagu soo doorto ama madaahibta diinta la cuskado waxaa meesha soo geleysa iskooxeysi ku dhisan sinji iyo madhab, waxaana loo noqonayaa xeer jajab, sinaan la`aan iyo inaan laga bixin jabhado iskhilaafsan. Waxa keliya ee dalka soomaalida u keeni kara nidaam dowladnimo waa xisbi aan qabiil, madhab, iyo dano gaara aan ku mideysneyn. Ilaahey dadka iyo dalka Soomaaliyeed ha ku garabgalo xisbiyo siyaasadeed oo dadka intiisa badan fikradoodu ay ku aruurto.